Mampiasa ny teknolojia famatrarana encoding tena tsara, manohana H.265, H.264 encoding, ambany kely tahan'ny ambany ny kalitaon'ny sary, fampihenana ny fandefasana bandwidth sy ny toerana fitehirizana;naorina-in tena tsara auto-focus sy ny auto-exposure algorithms, marina fifantohana sy haingana haingana , tsara fiposahan'ny masoandro vokany, alina fahitana tsara ambany-jiro vokany;manohana ny fidiran'ny zavona optika sy ny fidiran'ny zavona elektronika super zavona fidirana asa.
Fakantsary fakan-tsarimihetsika avo lenta efatra tapitrisa ary lens optique mandroso mihoatra ny 300 mm no mampiasa ny vokatra azo avy amin'ny sary tsara indrindra eo ambanin'ny algorithm, mifanaraka amin'ny protocols isan-karazany toy ny PELCO, VISCA, ONVIF, ary azo ampidirina amin'ny fakantsary isan-karazany Ao amin'ny rafitra.
4MP 52X Optical Zoom manohana ny Defog
Misy ny fiambenana sy ny fitsangantsanganana
Max 256G Micro SD / SDHC / SDXC fanohanana
Ny protocl ONVIF dia mifanaraka amin'ny sehatra samihafa
Ny rindrina efijery fanaraha-maso sy mibaiko dia afaka mampiseho ny sarin'ireo teboka fanangonana eo anoloana amin'ny fotoana tena izy.
Ny sary video rehetra dia voarakitra sy voatahiry ao anatin'ny dingana manontolo, ary ny sary ara-tantara taloha dia azo anontaniana sy averina.
Izy io dia mampiasa ny echo digital echo pan/tilt, izay manana ny fiasan'ny fampahafantarana ny toerana misy ny fotoana tena izy;miaraka amin'izay koa, izy io dia manana fakan-tsarimihetsika lava sy fakan-tsarimihetsika avo lenta avo lenta;ny loha pan/tilt dia azo fehezin'ny klavier miasa natokana ho an'ny fanaraha-maso.
Amin'ny alàlan'ny fametrahana toerana fanaraha-maso dia azo jerena ny faritry ny ala manontolo.
Ny rafitra dia manana fiarovana avo ary manaiky ny fanamarinana ny mpiasa, ny fanaraha-maso ny fidirana ary ny asa fanaraha-maso mba hiantohana ny fiarovana sy ny fahamendrehan'ny rafitra.
Fahazoan-dàlana amin'ny fangataham-panontaniana: Noraisina ny famolavolana ny fikorianan'ny fotoana, ary ny fakana ny angon-drakitra dia azo vita amin'ny fotoana, ny daty ary ny toerana fanangonana farany.
Ny fomba fifindran'ny tariby optika dia mampihena ny vidin'ny rafitra.
Famantarana ny afo sy fanairana: Rehefa tratran'ny doro ala ny fakan-tsary fanaraha-maso, ny rafitra dia hanamarina ny toerana misy ny afo ary hampandre ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fanairana feo.
Rafitra herinaratra: Ny famatsiana herinaratra dia ao anatin'ny tontolo rehetra amin'ny toetr'andro mba hiantohana ny famatsiana herinaratra tsy tapaka ho an'ny rafitra.
Rafitra fiarovana amin'ny tselatra: Ny rafitra dia tsy maintsy manana fepetra fiarovana fiarovana amin'ny tselatra mba hahazoana antoka fa afaka miasa tsara ny rafitra.
Izay manana toe-tsaina tsara sy mivoatra amin'ny fanirian'ny mpanjifa, ny orinasanay dia manatsara hatrany ny kalitaon'ny entam-barotra mba hanomezana fahafaham-po ny fanirian'ny mpanjifa ary mifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana, ny fahamendrehana, ny fitakiana ny tontolo iainana, ary ny fanavaozana ny Supply OEM China 4MP 52X Zoom Network Camera Module for Drone, Ny orinasanay dia manolo-tena amin'ny fanomezana ireo mpividy entana manana kalitao avo lenta sy tsy miovaova amin'ny vidiny masiaka, miteraka fahafaham-po ny mpanjifa tsirairay amin'ny vokatra sy serivisy.
Famatsiana OEM China IP Camera,Block Camera, Ny fisiantsika tsy tapaka ny vokatra avo lenta miaraka amin'ny serivisy tsara alohan'ny fivarotana sy aorian'ny varotra dia miantoka ny fifaninanana matanjaka amin'ny tsena mihamitombo hatrany.tongasoa mpanjifa vaovao sy taloha avy amin'ny lafim-piainana rehetra mba hifandray aminay amin'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazana iombonana!
teo aloha: 2MP 72x Network Zoom Camera Module
Manaraka: 2MP 92x Network Zoom Camera Module